Honor 8C VMall मा यसको विशिष्टता र छविहरूको साथ देखा पर्दछ Androidsis
अर्को अक्टुबर,, Huawei सहायक कम्पनी Honor 8C प्रक्षेपण गर्न, एक स्नैपड्रैगन 632 XNUMX२ प्रोसेसरको एक मिड-रेन्ज फोन। यस कारणले, यो बजारको पहिलो स्मार्टफोन हुनेछ जुन यस मोडेललाई सिस्टम-अन-चिपले सुसज्जित पार्नेछ, जुन क्वालकॉमबाट आएको छ।
यो जानकारी भर्खर VMall द्वारा लीक भएको छ, एक चिनियाँ अनलाइन स्टोर जुन कम्पनीले यसको औपचारिक घोषणाको लागि प्रतिक्षा गर्न चाहेको छैन, यसको सबै विवरणहरू र छविहरूका साथ यसको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न। यसलाई जान्नुहोस्!
VMall सूची अनुसार, Honor 8C ले .6.26.२XNUMX इन्च लामो IPS LCD स्क्रिन सुविधा दिन्छ। यो तेर्सो तवरले विस्तारित खाचको साथ आउँदछ, को HD + रेजोलुसन १,1.520२० x p२० पिक्सेल छ, र .720०..80.4% स्क्रीन-देखि-शरीर अनुपात, साथै स्लिम १:: aspect पक्ष अनुपात प्रदान गर्दछ।
जसरी हामी आशा गर्छौं, यस स्न्यापड्रैगन 632 XNUMX२, जुन यस वर्ष जुनमा घोषणा गरिएको थियो, उपकरणको हुड अन्तर्गत उपस्थित हुनेछ। चिपसेटले चार १.250 GHz Kryo २ 1.8० कोर र अर्को चार क्यारो २ 250० कोर समान आवृत्ति, थप एक Adreno 605०XNUMX GPU समावेश गर्दछ।
सोसी4जीबी र्यामको साथ मिलेर र or२ वा GB 32 जीबी आन्तरिक भण्डारण ठाउँको साथ मिलाइनेछ, जससँग २64 जीबी क्षमताको माइक्रोएसडी कार्ड मार्फत विस्तारको लागि समर्थन छ। यस्का साथसाथै, यससँग ,4.000,००० एमएएच ब्याट्रीaवी / २ ए चार्जको साथ छ, जसले हामीलाई उत्कृष्ट स्वायत्तता प्रदान गर्दछ। यसका साथै यो EMUI .8.1.२ अन्तर्गत एन्ड्रोइड .8.2.१ ओरेओको साथ आउँदछ र पछाडि फिंगरप्रिन्ट रिडर छ।
फोटोग्राफिक सेक्सनमा, Honor 8Cf/ 8 अपर्चरको साथ 2.0 मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा लैजान्छ र एक डुअल क्यामेरा सेटअप जसमा एफ / १.13 अपर्चरको साथ १ 1.8-मेगापिक्सल प्राथमिक सेन्सर रf/ २.2 अपर्चरको साथ २-मेगापिक्सलको मोनोक्रोम सेन्सर समावेश छ। फ्रन्ट क्यामेरा एआई अनुहार मान्यता को लागी समर्थन छ।
Honor 8C मा उपलब्ध कनेक्टिभिटी विकल्पहरूमा G जी VoLTE जडान, डुअल-सिम समर्थन, ब्लुटुथ 4.२, Wi-Fi 4.2०२.११b/ g / n, GPS, र mm.mmmm अडियो ज्याक समावेश छ। एक फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर फोनको पछाडि अवस्थित छ.
Honor 8C र var भेरियन्टमा निम्न विकल्पहरू सामेल छन्: म्याजिक नाइट ब्ल्याक, अरोरा निलो, प्लेटिनम गोल्ड, र बैजनी। अबको लागि, त्यहाँ Honor 8C को मूल्यहरुमा कुनै जानकारी उपलब्ध छैन। यद्यपि हनर 8 एक्सको १ price1.399 युआन (~ १175 यूरो) को शुरुवात मूल्य छ, अर्को Honor 8C को लागी लगभग 999 125 yuan युआन (~ १२~ यूरो) खर्च हुन सक्छ। यो केहि चीज हो जुन अक्टोबर ११ मा हेर्न सकिन्छ, यसको औपचारिक सुरुवातको मिति।
फोनमा अधिक जानकारीको लागि, भ्रमण गर्नुहोस् Honor 8C VMall पृष्ठ। यसको बारेमा सबै कुरा त्यहाँ कागजात गरिएको छ मध्य दायरा प्रस्तुत गर्न अर्को
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » Honor 8C का विनिर्देशहरू र छविहरू VMall मा देखा पर्दछ: SoC SD632 को साथ पहिलो फोन